Kedu esi achọta ndị ọkachamara search engine optimization ọkachamara?
Kwadoro ndị nwe ụlọ ahịa, ndị webmasters, ma ọ bụ ndị novice n'achọmnta ego n'ịntanetị - ha niile na-elekwasị anya n'otu otu nzube. Nzube ha bụ isi bụ ime ka ebe nrụọrụ weebụ ahụ dị n'elu n'elu nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ (SERPs). N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike ịma na ọ maara nke ọma na ọ bụ ọganihu nke Ọchịchọ Nchọgharị Search (SEO), ọ bụghị ịsị ndị na-enye ọrụ ụlọ ọrụ ọkachamara, maọbụ na-arụ ọrụ n'otu ìgwè, ma ọ bụ ụlọ ọrụ nchịkọta dijitalụ nke ndị ọkachamara njikwa search engine.Ọ bụ ya mere ọtụtụ n'ime anyị ga-eji nwedịrị ike ịchọta isiokwu ahụ n'onwe ya, ọ bụ ezie na a maara ya nke ọma na ọ na-arụsi ọrụ ike ma na-ewe oge maka ihe ka ọtụtụ n'ime nhọta ọ bụla ị na-eme. Ya mere, anyị na-emesị bịaruo isi - na-atụle mkpa ọ dị inwe ọrụ SEO zuru oke na-enwe ọganihu dị elu, ebe a na-ebute ọchịchọ dị oke mkpa ịnya ụfọdụ ọkachamara nyochaa njirimara search engine.Ma otu esi achọta onye ọkachamara a ma ama ma ọ bụ ụlọ ọrụ na ọnụọgụ ahụ dị mkpa na Ịntanetị? Kedu otu esi eme ka ọdịiche dị n'etiti ezigbo pro, onye na-enye SEO na-adịghị ike, ma ọ bụ ọbụna ndị ọkachamara na-eme ka hà bụ ndị ọkachamara nyochaa njikwa search engine? Ekwenyere m na ị na-ajụ ajụjụ ndị na-esonụ ma na-ahụ azịza ndị mmeri nwere ike ịghọ ụzọ dị oke nghọta nke onye. Ya mere, ka anyi hu.
Jụọ ndị ndụmọdụ SEO na-ekwe nkwa igosi gị nzere ha, m. e. , ndepụta nke ndị mbụ na-eguzo ahịa. Ndị ọkachamara na-achọpụta ihe ndị ọkachamara na-achọpụtaghị mgbe ọ bụla ga-enye gị ozi niile dị mkpa na ozi kọntaktị. Ime otú ahụ, ị ​​nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa ma ọ bụrụ na onye ọrụ SEO dị otú a kwesịrị, ma ọ bụ ihe ọ bụla na ya. Naanị ị nwere ike ịlele ọ bụla n'ime ọrụ mbụ ha maka ihe ọ bụla dị mma maka ọkwa dị mma.
Jụọ ha otú ha ga-esi eme ihe maka ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma na SERPs. Onye ikike SEO nwere ikike agaghị ajụ ma ọlị, ọbụlagodi nke kachasị mma, mkparịta ụka ma ọ bụ ịjụ ajụjụ. A ghaghị igosi gị oge ziri ezi na mgbalị SEO ha na-abịa na ogo gị ọganihu site na nzọụkwụ mgbe ị na-ezute mkpokọta gị na njedebe.
Jide n'aka na ị ga-enyocha ihe nyocha na ụlọ ọrụ ahụ na ha na-enye gị onyinye. Akụkọ dị otú ahụ kwesịrị ikpuchi nkọwa maka nsogbu ọ bụla ị na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ na-eche maka oge ahụ. Ekwuru m na ị ghaghị igosi ozugbo nsogbu, karịsịa, na-egbochi saịtị gị site n'ịkwalite ọkwa.
Lelee n 'uzo ndi okachamara ndi choro nyocha choro ichota onu ogugu gi. N'otu oge ahụ, jide n'aka na ha na-enye onye ọ bụla ohere ịnweta kpọmkwem ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala otu nkwekọrịta nhazi nke ihe ha chọpụtara, kwadoro ihe kachasị data sitere nchịkọta Google.
Ma ebe a anyị na-abịa ajụjụ kachasị mkpa. Naanị jụọ ha ma ọ bụrụ na ha nwere ike inye gị akaebe ka egosiputa n'elu SERPS, ana m eche na ị ga-ewere ọnọdụ otu n'ime ndepụta nke nsonaazụ ọchụchọ. O kwesiri ime na enyere gi azịza zuru oke, egbula oge ịhapụ "ọkachamara" dị otú ahụ na obere oge. Ezi ndị ọkachamara nyochaa njikwa search agaghị agwa onye ahịa ụdị ihe efu. Naanị ndị na-enweghị ihe ọhụụ, ma ọ bụ ọbụna njọ, ndị na-eme ihe ike nwere ike ime ihe dị otú ahụ iji ghọgbuo ndị ahịa dị mfe na ndị na-amaghị ihe Source .